Imikhiqizo automakers Chinese minyaka sekwande kakhulu phakathi bezwe kwethu. Phela, njengoba inani lentengo yayo iphansana yalezi zimoto isethi ezinhle ongakhetha eziyisisekelo futhi omuhle kakhulu izici lobuchwepheshe ukuthi ubavumele ukuba bancintisane kalula ngemikhiqizo ye abakhiqizi adumile emhlabeni.
Omunye ezichumayo izimoto eChina, kucatshangwa ukuthi izimoto off-road. Futhi Wall Enkulu entsha le Hambisa phezu le h5, izibuyekezo kukhona muhle kakhulu emvelweni, ubhekwa buphawuleka kakhulu imoto "ezimele", okusho ukuthi akuyona isifaniselo models ubudala European noma Japanese.
Ngokuyinhloko -Great Wall Hambisa phezu h5, umnikazi Izibuyekezo uqinisekise lesi, ine omuhle kakhulu izici lobuchwepheshe, kanye omangalisayo ingaphakathi gumbi design. Ngokungafani esasisandulele, Suv entsha kwaba design neqondayo ngaphezulu umoya ehola abakhiqizi European. Imodeli entsha sinyamalale fussiness kanye kukhathazeka zikagesi ezinkulu nezilawuli ukukhanyisa.
Njengoba amandla iyunithi efakwe kwi izimoto ezimbili zama-izinjini - 2.5 litre, 150-hp turbodiesel torque engu okusezingeni eliphezulu petrol iyunithi ukusebenza ivolumu 2.4 amalitha.
sici Bezakhiwe kuba phambi uzimele imoto, okuyinto liwuhlukanise encintisana eziningi ezisebenzisa lokhu njengeqembu.
Kodwa on the Izibuyekezo Great Wall Hambisa phezu h5 kukhona ingxenye ongathandeki, futhi ezimweni eziningi abathengi sithambekele ububi esihlalweni lateral ukwesekwa yokushayela, futhi esimweni wezangaphakathi imoto lesikhumba kusikisela ukuthi Upholstery eshelelayo kakhulu. Nokho, lokhu kunalokho subjective futhi akusho kunganciphisa amaningi, uquketheni lowo Suv entsha.
Omkhulu Wall Hambisa phezu h5, izibuyekezo abanikazi bayo bukhomba lokhu, has a uhlamvu off-road ezigqamile, isakhiwo Uhlaka, khona downshift futhi ephakeme imvume ndawonye uyivumele usebenze kakhulu ngisho nangaphansi kwezimo indlela enzima, emigwaqweni ewubhuqu yasemakhaya futhi ihlathi kuzo zonke izimo zezulu.
Esinye isici esihle Omkhulu Wall Hambisa phezu, okuyinto libuyekeza uqinisekise lesi Empeleni, kubhekwa yenqwaba sangaphakathi gumbi and imithwalo gumbi, ukuthi nge eligoqiwe izihlalo ezingemuva kungaba athwale imithwalo ngisho elikhulu.
Njengoba imishini okujwayelekile imoto ukukhwezwa le-airbag amabili ngaphambili, uhlelo ABC kanye EBD, kanye namazinga ngombala eziphambili - nokulawula sezulu uhlelo nekhamera esimenza abone into engemuva.
Sekukonke Omkhulu Wall le Hambisa phezu, izimpendulo zomnikazi uyivumele ukuba bawuqonde ngokucace - ithuba elikhulu ngentengo ephansi ukuthenga eliphezulu Suv, okuyinto has ukusebenza hhayi kuphela kakhulu futhi waba nokwethenjelwa, ongaphakeme yesondlo imoto, kodwa futhi i-bundle kuqhathaniswa ocebile eyenza le moto imbangi uyakufanelekela eziningi ngempela abakhiqizi ezinkulu emhlabeni imifanekiso.
Iqoqa wokugoqa yezandla zabo. Ukuwa uzwane wedwa
Zelenka: ukugeza off isikhumba, lendwangu ifenisha. izindlela eziphumelelayo kanye nezincomo